मन्त्रीका नाममा बेरुजु! :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
मन्त्रीका नाममा बेरुजु!
मन्त्री भएका सांसदका नाममा संसद् सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा बेरुजु देखिएको छ। शाखाले केही मन्त्रीले हिसाब मिलान नगरेको जनाएको छ। यो खबर हामीले आजको नेपाल समाचार पत्रबाट लिएका हौ।
शाखाका लेखापाल वैकुण्ठ उदासले मन्त्रीहरूले सांसदबापत पाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेे जनाए। ‘सांसदलाई खातामा पैसा हालिदिने गरेका छौं तर मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तलब पाउनुहुन्छ’, उदासले भने– ‘सांसद भएर मन्त्री नहुँदा जति दिनको बढी पैसा गएको छ फिर्ता माग्छौं।’ उदासले महिनालाई दिनमा गणना गरेर हिसाब मिलान गरिने बताउनुभयो। सांसदलाई यसअघिको संसद्को कार्यकाल रहँदा महिनाको शुरुमा नै तलब उपलब्ध गराइन्थ्यो। यसपालि सांसदले फागुन महिनाको तलब बुझेका छन्। महिनाको अन्तिममा मात्र तलब दिने संसद् सचिवालयको तयारी छ।
संसदीय दलका पदाधिकारी र सांसदहरूले संसद् सचिवालयबाट लिएका सुविधाका ल्यापटप पनि अझै बुझाएका छैनन्। जिन्सी (एकाइ) स्टोरका शाखा अधिकृत बिनोदकुमार मालीले समयमै ल्यापटप नल्याउने संसद्का पदाधिकारीलाई जानकारी गराइएको बताए।
सुविधाका लागि रातो पासपोर्ट लिएका सांसदले पनि अहिलेसम्म सबैले रातो पासपोर्ट बुझाएका छैनन्। सांसद सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभाग गएर वा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा समन्वय शाखामा आएर पासपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ। शाखाकी उपसचिव रेखा उपाध्याया खनालले राहदानी विभागमा नै पूर्वसांसद्ले बुझाएको पासपोर्टको विवरणको जानकारी पनि शाखामा आउने बताए। शाखाले पासपोर्ट बनाउनका लागि सांसदलाई समन्वय गर्दै आएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०७४, ०७:१९:२३